Mourinho Oo Aan Ku Faraxsaneen Qorshaha Roma Ay Ku Dooneeyso Saxiixa Xhaka – Garsoore Sports
Mourinho Oo Aan…
Kooxda kubbada-cagta Roma ayaa degtay qorsho layaab leh si ay u rumeeyso xiisaha kooxda oo aad ula dhacsan saxiixa xiddiga khadka-dhexe ee kooxda Arsenal Granit Xhaka.
Roma ayaa dooneysa inay iska iibiso Alessandro Florenzi arrintaas oo ka hor imaaneysa ujeedooyinka ugu wanaagsan ee Jose Mourinho si ay ugu dambeyn ula soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka xagaagan, sida laga soo xigtay Tuttosport.
Florenzi wuxuu imaan doonaa Rome marka uu dhammeeysto fasaxiisii ​​Euro 2020 kaddib 1da Ogoosto si uu kooxdiisa dib ula bilaabo tababarka kahor xilli ciyaareedka cusub. Laakiin mustaqbalkiisa kooxda Serie A ayaan la hubin wixii intaas ka dambeeya, maadaama agaasimaha guud ee Tiago Pinto uu soo dhaweynayo dalabyada u imanaya xiddigan.
Roma ayaa rajeyneysa inay 10 milyan ka hesho iibinta Florenzi, iyadoo qeyb ka mid ah ay markaas u soo bandhigayso Arsenal si ay ula soo saxiixato Xhaka. Pinto ayaa sidoo kale rajeyneysa in kooxda ay iska iibiso Robin Olsen oo hore amaah ugu soo qaatay Everton iyadoo ay xiiso ku aaddan xiddigan ay ka heleyso kooxda Faransiiska ee Rennes si ay u sii kordhiso miisaaniyadda Giallorossi.
Laakiin in kasta oo Mourinho uu muddo dheer damacsanaa in Roma ay Xhaka kala soo wareegto Arsenal, Pinto ayaa ka xanaajin kara tababaraha reer Portugal isagoo iibinaya Florenzi. Tababarihii hore ee Tottenham Hotspur ayaa doonaya in xiddiga dambeedka-middig ee xulka Talyaaniga uu kasii mid ahaado kooxdiisa cusub ee Rome.
Florenzi, si kastaba ha ahaatee, wuxuu rumeysan yahay in waqtigiisa Giallorossi uu gaaray dhammaadka kaddib markii uu xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay kooxda Paris Saint-Germain. Pinto wuxuu rajeynayaa sagootinta 30-jirka-oo lagu daray tan Olsen in ugu dambeyn ay waddo u furi doonto usoo dhaqaaqidda Xhaka ee Stadio Olimpico.
XHAKA WUXUU U DOONAYAA ROMA IN KA BADAN IYAGA
Xhaka ayaa u muuqda mid doonaya inuu ku biiro Roma si la mid ah sida Mourinho uu u doonayo inuu la soo saxiixdo xiddiga qadka dhexe ee Arsenal xagaagan. Il Romanista ayaa werisay in Swiss-ka uusan dooneynin inuu u ciyaaro Gunners kulankooda furitaanka Premier League ee Brentford.
Xiddiga 98 kulan u saftay xulkiisa Switzerland ayaa xitaa horay u ogolaaday heshiis seddex sano ah oo uu la galay wakiilo ka socda Stadio Olimpico, sida ay rumeysantahay Calciomercato. Xhaka ayaa sidoo kale hoos u dhigi doona mushaarkiisa Arsenal 50% isagoo £ 50,000 isbuucii qaadanaya si uu ugu biiro Roma, maadaama uu yahay rabitaankiisa inuu ka tago kooxda.
Gazzetta dello Sport ayaa xustay in xiddiga reer Switzerland uu ka tanaasulayo wax walba si uu uga tago Gunners. Laakiin qiimaha iibkiisa ku baxaya ayaa had iyo jeer ahaa dhibic ku dheggan Roma. Pinto ayaa kasoo horjeeda in Arsenal la siiyo waxa ay aaminsan yihiin in Xhaka uu u qalmo, shan sano kaddib markii uu ku yimid £ 35m.
Rasmi: West Ham Oo La Wareegtay Goolhayihii PSG
Rashford Oo Qaliin Garabka Ah Maraya Iyo Goorta Uu Garoomada Kusoo Laabanayo